Iwe unogona kuunza shanduko uye zvisarudzo zvako zvakashata! : Martin Vrijland
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	pana 10 June 2019	• 12 Comments
Kazhinji paunotanga kukurukurirana nevanhu vanotanga kuziva kuti nyika iyo mhizha uye vezvematongerwe enyika vari kutitaurira inobva zvakakwana mukunyengedza uye kunyengedza, kupindura kunenge kusina tariro uye mumutsipa we "iwe haugone kuita chinhu pamusoro payo kuita ". Ndinogara ndichiona kuti inofadza kugumisa. Sei usina kukwanisa kuita chimwe chinhu pamusoro pazvo? Ndizvo here nokuti tinorarama muNetherlands nevanenge mamiriyoni evanhu vane mamiriyoni evanhu vari mudiki kadiki yepasi kana nekuda kwehuwandu hwenyika huri mamiriyoni e18?
Wedzera huwandu hwevanhu vanoona chifananidzo muNetherlands? Ava ndivo vashoma vevatambi vezvematongerwo enyika vanoita kuruboshwe, kurudyi, ruvara rwepuruvara, ruvara rwepepuru, rwemapikisa uye rwekupikisa uye vashoma vanoona vatariri mumasangano (sevadzivisi vemashoko ehau, vatori veTelgraaf (nemamwe mapepanhau), Jeroen Pauw, Matthijs van Nieuwkerk uye vanoreva zita rose rakabhadharwa vanoparidzi vepanhau). Icho chikwata chiduku.
Zvatiri kutarisana nazvo ndizvo zvandinongoidza 'system'. Icho chirongwa chemuradhi mukati umo radar yose inoita basa rose reawa. Nzira yemitemo, mitemo nemitero uye vese vatsva vemitemo yose, mitemo nemitero. Uyezve une dzimba dzekudzidzisa uye vadzidzisi uye zvinhu zvose izvo vanhu vanodzidza kushanda pamwe nemutambo.
Chikonzero nei tisingakwanisi (kana kuti, kureva) kutendera) kurega kubuda kwehurongwa uye chikonzero chatinenge tisingadi kudzinga chidiki ichocho chevadzidzisi venhema kubva panzvimbo dzavo kana kuti kuti tizive kuti takaitwa navo, ndechokuti isu ona kuti kune zvakawanda zvekanganiso, asi panguva imwechete inotarisana nemutauro iwoyo. Vanhu vangani vanoshanda muzvivako vakuru zvehofisi pavanoshandisa mitemo, kutarisa vamwe vanhu kana kudzidzisa chizvarwa chinotevera. Vamwe vanoshanda mu 'rubatsiro' apo munhu wose asingakwanisi kushanda mukati mehurongwa akadzingwa kana kuti akaiswa pasi. Kana mumwe munhu ari mumamiriro ezvinhu anotyisidzira kusimisa nguva, iyo radar ichadzoserwa neimwe itsva.
Hatizivi chinhu kunze kwe "system"; isu hatizivi nyika inotungamira pasina hutongi huripo. Ndekupi kwataizove tisingabatanidzi zvivako zvemotokari dzedu, zvitima uye ndege? Tingavepi tisina mitemo yemigwagwa, magetsi emigwagwa, mitemo nemitemo? Unofanira kuronga sei nyika? Kubvisa zvose izvi mitemo? Tinofanira kutevera rudzi rwemhirizhonga here? Uye huri hurumende ndiyo muenzaniso chete unoshanda? Kana ungada here kurarama pasi pekudzvinyirira?
Pfungwa yacho haisi iyo kuti nheyo dzemitemo dzakashata; pfungwa ndeyokuti avo vanofamba tende vanoita sekuti tiri kurarama mune zvematongerwo enyika, asi izvi hazvisi chinhu chinongova chimiro chehurumende yokudzvinyirira. Izvi zvinoshanda kumatunhu enyika uye pasi rose. Mukuwedzera, pfungwa ndeyokuti isu tinogara tichiputirwa mune zvematongerwe enyika uye nhau nehuwandu hwechiitiko chekutyisidzira kuburikidza nemhosva nekutya (kazhinji kuzvigadzira) uye nezvimwe zvinhu zvose, zvichiita kuti zviratike sekuti tinoda mitemo yakawanda uye inowedzera, mitemo nekuchengetedzwa kwezviyero. Iyo whirlpool iyo Kuramba uchidyisa kutya uye kutamba boka revanhu nekunyengera nekunyengera, zvishoma nezvishoma zvinokonzera vanhu kuti vararame nekuwedzera mune zvematongerwo enyika hurumende. Zvinosuruvarisa, zvinowanzobatanidzwa zvakanyanya kuwana shanji, kuitira kuti chingwa nemitambo zvigone kuramba zvichibhadharwa, uye saka vazhinji vanoramba vasina bofu kune zviri kuitika.
Philosopher Plato akambonyora nyaya iyo inonzi "mifananidzo yemapako" (ona kugadzira pamwe neshoko rino). Vanhu vari pasi pebako vakasungirirwa. Havana chavanoziva kunze kwemumvuri wezvinhu zvinopinda muchiedza chechiedza chekuita. Ngatitaurei kuti isu tose tiri vanhu avo mubako avo vakasungirirwa kune inozivikanwa. Plato anotaura munhoroondo yake kuti kana vanhu vaifanira kuendeswa kumusoro, vangangopofumadzwa zvikuru nechiedza chezuva uye saka vakavhiringidzwa neusununguko uye chaiwo maitiro ezvinhu (izvo zvavanongoita mumvuri) zivai mubako), kuti vangasarudza kusarudza nzvimbo yakasungwa yakanamirwa mubako kune rusununguko rwavakange vawana mukana wekutora.
Vanhu vari mubako havazombofi vakaziva ruzivo rwavo rwechokwadi semhaka yezvisungo zvavo. Havazombofi vakawana rusununguko rwechokwadi. Muzvokwadi; vazhinji vachasarudza nzvimbo yakasungwa uye mumvuri wezvokwadi nokuti inovimbwa. Vazhinji vachasarudza chiedza chechimiro chemashoko uye zvematongerwe enyika pamusoro pezuva.
Chero bedzi patinosarudza kugara mubako nekuchengetedza radar yemamiriro ekushanda; chero bedzi patinogutsikana nemumvuri wezvokwadi yatinogona kuwana (panzvimbo yekuzvibvisa kure nevaya vakatipinza muitiro iyo mitemo nemitemo zvinogadzira maketani edu uye chingwa uye kutamba chete inoumba pamadziro) hatizombofi takabudirira Chero bedzi patinoramba tichitarisana mumwe nomumwe kana isu tichiri kusungirirwa kuhurongwa uye hakuna munhu anokurudzira kuti aparadze maketani, ticharambira mumumvuri weyanzvi hwedu uye kuona nyika iyo inongova chiratidzo chemafu chechokwadi pamusoro porusvingo.
Inguva yekumira radhi; kuti aputse masheni uye anotya mapako evarindi pavanopinda mumugwagwa. Iwe unoda rwiyo urwu ipapo heroes ('tinogona kuva zuva rimwe chete') naDavid Bowie. icho chinhu chaunogona kuita nhasi uye chimwe chinhu chinonyatsokonzera chokwadi chako. Kana uchinge wasunungurwa kubva mumaketani, unogona kudana vamwe kumusoro uye kubatsira kukurira kutya kwekusununguka kwechokwadi. Dzingai maketani uye taura nemumwe wako pamusoro pekuchengetedza mutsara wevaranda mukati memubako. Iwe unogona kutanga nhasi; ndiko kutya kwako chete kubvisa kuvhara kwenhema kwenzvimbo yakajairika iri kukubata iwe zvakare. Simuka uye uputse zviketani zvako uye rega munhu wese anoedza kukumisa uye akuchengete iwe mubako anoziva mumashoko akajeka kuti hausi kuzova muranda wezvokwadi yenhema nokuda kwomweya wako hwose uripo.
Jos B. (Nicky Verstappen) PsyOp iye zvino aishandiswawo kudai zvinyorwa zvemakambani kumagweta?
Tags: zvinyorwa, bowie, zuva, Featured, nokuti, pako, heroes, chete, zvisarudzo, vezvenhau, mumwe, Plato, zvematongerwo enyika, chokwadi, change
Fungidzira kuti zvisikwa zvina zvakakoswa kubva mufirimu ino zvine mazita ezvematongerwe enyika akadai saMark Rutte, vashandi vekubudisa nhau vakaita saJohn de Mol, Peter R. de Vries, Jeroen Pauw, Matthijs van Nieuwkerk, Eva Jinek nevamwe vazhinji. Iwe unotofanira kuisa ruvara pazviri uye ona zvinoitika:
Kwandiri ine nyaya yakanaka uye yakajeka!
Ikozvino maitiro anobva pane "simba" uye "simba" iri rinochengetedzwa nevose vanobatanidzwa.
Sei "simba" muzvinyorwa zvinyorwa?
I "simba" iri muhurongwa haisi simba rechokwadi, asi "simba" rinoenderana nekusaziva, kutya, kushandiswa uye kuparadzwa. Vaya vanotonga hurongwa uye saka vane "simba" pamusoro pevanhu vadzidzisi mukugadzira uku kusaziva, kutya, kushandiswa uye kuparadzwa pakati pevanhu vari vanhu. Mwana wevanhu anoberekerwa pasina nyika uye anosungirwa kubatanidzwa muhurongwa, izvo-zvinonzi system inoshumira zvinodiwa nevanhu vose ... sangano; vanhu vanofarira.
Hakuchina ruzivo rwevanhu vose! Icho chinotyisa chikwata, apo madmen, makuru egos, narcissist uye psychopaths vakakwanisa kuwana "nzvimbo dzakakwirira". Nyika yeNetherlands inodzvinyirira!
Ichokwadi kana simba rechokwadi rinobva paukwanisi hwokusika, kutora hukama uye kuenzanisa. Vanhu vakangwara chaizvo vanogona kuumba zvinhu zvakanaka kwazvo, pasina kuisa pangozi kodzero yekuvapo kwevamwe vanhu, maruva nemhuka.
Zvinosuruvarisa, maererano nehurongwa, zvinoita se "vanhu vakangwara" vanhu vari kure nekunzwisisa! Vanhu ava vanoita se "vakangwara" vakagadziriswa zvakajeka uye vakarongerwa muhurongwa uye vakamedza kuparadzira uye kudzidzisa. Vanhu ava havasi kusika chero chinhu, asi vanoita mabasa avo muhurongwa, uko pasina nzvimbo yekunzwisisa kwechokwadi, iyo inogona kuzviratidza muzvisikwa zvechokwadi uye apo kuenzanisa nekubatana zvinowanzoitika. Mienzaniso yevanhu vakadaro vanoshushikana ndivo vatungamiri uye nyemberi collar ... ndiani asingagoni kubvumira vanhu vechokwadi vakangwara munzvimbo dzavo. Vhidhiyo yeThe Incredibles (munyaya yacho) muenzaniso wakanaka weizvi. Munhu wose anoseka purogiramu iyi inonakidza, asi vashomanana chete vanogona kutora shoko rose uye vanozviona pachavo muchionioni ... kana vakakwanisa kuisa pasi nyika yakasikwa negogo ravo.
Dzokera kubasa mangwana uye ita zvose zvaunogona kuti uwane nzvimbo yako. Ndiani anoziva, panogona kunge kune kukurudzirwa! Usafunga pamusoro pezvauri kunyanya kuita. Pashure pezvose, haugone kuchinja nyika. Vanhu vasingakwanisi kuenda kubasa vagara vakabudirira kubudirira nehurongwa. Izvo zvinotevera zvinoshandawo kune vanhu ava: musaita chinhu, nokuti hamugone kubatsira.
Kana iwe usingazivi chaungaita, shandisai nyaya dzebhundaneti ino uye tsigirei webhusaiti iyi nemari yakawanda.
Chinyorwa chakanaka chaMartin uye mhinduro yakanaka kubva Muranda Mubairo!
Maasland akanyora kuti:
Iwe wakaisa mazita akadaro akadaro. Asi inoramba isingabatsiri
Hazvina mhosva kuti iwe unofunga nezve "mabhuku matsvene," uporofita ihwohwo huchava "hwakarurama" hwakazadziswa.
Kana tikaita nix, ipapo iyo inopfuurira. Kana tikarangarira 100den (ingave kana isati yakasikwa seyiyo inopikiswa yakarwisana) zvirongwa uye vanhu kuti vanyore kushungurudza ... .. zvino inowedzera nzira yekutonga ... ... izvo zvichazoguma zvichiguma nemugumisiro wakafanana: a 100 % inotungamirira sangano umo "vakawanda vaduku ivo vakakwirira vacha (vanofanira) kushumira".
Kunyangwe uchienda kunogara mune imwe tende mune vashomanana, uye zvino kukura yako endive, haisi mapu anobudirira, nokuti zvishoma zvacho zvichazoguma zvamedzwa nemaitiro akafanana.
Zvingave here kuti Chokwadi chiri kunze kwemafaira edu ekutaura? Zvingave here kuti nheyo yeimwe yemabhuku matsvene aya "yakarurama" ichizadzikiswa, uye zvakare huporofita hwakanyorwa nezvenguva inotevera? Chinhu chimwe chete chaunofanira kudzidzazve mubvunzo: dai zvingave kuti kune simba reMweya rakanyatsoronga nguva ino (iyi eon), umo zvakanaka nezvakaipa zvakaratidzwa pamwe chete, uye izvo zvinobva paawa eon kutanga kutora zvakakwana? Mune izvozvi tinorarama munguva inofadza uye yekudzidza yakakodzera.
Asi ndinoda kuverenga chidimbu kana kuti 6 mazano anobatsira kubva kwauri pamusoro pekuisa sei foni yako yekushanda, uyewo kufarira kuverenga zvaunotarisirwa kune nyika iri nani.
Mukufunga kwangu iwe unofunga kutaura kuti ichinangwa icho uporofita hwechitendero hunofanira kuzadzikiswa. Zvinofanira kuonekwa kuti uprofita hwezvitendero zvikuru hunofananidza uye hunopesana zvakadzama, kuitira kuti huve nehuviri hunodiwa nehondo yakakosha pakati pemapoka evanhu.
Ndatsanangura mune zvinyorwa zvedzimwechete zvandinotenda kuti tinorarama muchokwadi chaiyo. Ichokwadi chekufananidzira chakavakwa ne "huMwari" chaihwo chaihwo (muvakidzani wekufananidzira), iyo inonamatwa mumapoka akavanzika uye Chechi yeKaturike: Lucifer
Ndakatsanangura zvakare kuti chinangwa chekufananidzirwa ndechekuti panofanira kunge kusarudzwa kusununguka. Kana zvisina kudaro kuenzanisira kwaizova deterministic uye chigumisiro chakanga chave chave chichinyatsojeka, naizvozvo hazvizovi kuenzanidza, asi firimu inonzi deterministic.
Zvisinei, kuitira kuti atungamirire mhedzisiro uye kutungamira script (yeuporofita ihwohwo), muvakisi akaisa 'kusingatambi mifananidzo' muchimiro; mavatari ayo anotungamirirwa naiye anofanira kutumira mhando dzevaraidzo (mweya inobatanidzwa mumutambo wemavhidhiyo kuenzanisa) mumutungamiri wenyaya huru.
Hungu, pane naizvozvo 'mwari' (muvaki) wekufananidzira uku Hongu, pane script inogona kuwanikwa muuporofita uye hongu, pane boka (vatatari) vanoedza kuona iyi script.
Saka ndinoda kukupa mazano 6 anobatsira waunokumbira:
1. Rega kudavira mudenga negehena (unhu) uye uchitenda mune zvose zvitendero zvikuru zvinokuudza, nokuti Mwari / Satani kana denga / gehena muenzaniso ndeyemhando yakasikwa sechikamu chekufananidzana kukuisa iwe mumaoko tumira magwaro evarindi uye upe mweya wako kuna mwari (muvaki wekufananidza); kana "mwanakomana wemwari" (muvaki wekufananidza mumapfeke emakwai).
2. Zvinyongedze muzvokwadi yemufananidzo uye uzvichenese mukushandiswa kwekuti vasiri-kutamba mavara avatars zvinotungamirirwa nezvo zvatinotiwo masangano, asi izvo chaizvoizvo zvinoreva 'kutungamirirwa nemuvakidzi wekufananidza'.
3. Tsvaga kuti izvi zvisiri zvekutamba mavara avatars zvinoshandisa uporofita hwemachechi ose kuti aite script guru nekunyengedza mweya (avo vanobatana mumutambo wemuenzaniso mukuenzanisa) kuzvipira zvakajeka kuna Luciferian AI ("upenyu husingaperi") yezvitendero, "kubatana" kwekutenderera kwevanhu; kuva imwechete uye yakafanana).
4. Bvisa script-kurinda isati iri kutamba mavara avatari, asi pamusoro pezvose, chengetedza vanhu ivavo munhau uye mune zvematongerwe enyika avo vakazvipira vakazvipira kuti vawanikwe kuvarati veshoko rekuchengetedza script; tiri kutaura nezvemazita anozivikanwa mune zvematongerwe enyika uye nhau (zvose zviripo uye boka rinodzorwa rinopikisa iro pamwe chete rinopa kudya mutambo wehuviri).
5. Rega kuzvishongedza pane imwe nzira pakushumira script uye uchitarisa kuenzanisa maererano nemitemo yavo: buda mubako rako uye ushingairire kukunda kutya kuti pasina rusununguko rwevaranda uye usingave chikamu chebasa ra raarar iro richaenda zvisina kunaka.
6. Isa pane imwe nzira yechitendero nekutenda kune "pano Jesu" (kana chero simba rekunze rinouya "kukuponesa") uye ona kuti iwe uri mubatsiri wezvisarudzo zvako. Kana iwe uchiona kuti mutemo wekusununguka kusununguka uchagara uchishanda, ipapo iwe uchaona zvakare kuti zvese zvaunosarudza (izvo zvinotsauka kubva pane zvaunoda zvakanyorwa script) zvinobatsira kuchinja chigumisiro chekupedzisira uye kunobatsira Luciferian aida mugumisiro wekupedzisira.
Kuti uwane tsananguro yakazara yezvandiri kutaura pamusoro apa, verenga nyaya ino: https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/het-is-kinderlijk-eenvoudig-om-de-toekomst-te-voorspellen-als-je-het-script-doorziet-wordt-een-nostradamus/
Kana kuti verenga zvinyorwa pasi pemenyu iri pasi pemusoro unoti 'kuenzanisa' uye tanga pa peji 2 uye ipapo ramba uchingoverenga kusvikira chikamu chekupedzisira.
Kunyatsoongorora nekupfupisa kwezvinyorwa zvezvinhu zvako zvose zvawakanyora mumakore achangopfuura. Mukutsvakurudza kwangu ini ndinouya kumhedziso imwechete (s). Icho chinangwa chakanaka asi 'munguva yehupenyu hwedu' iyo script haingashanduki (yakakwana) (hupenyu hupfupi kwazvo kune iyo). Mbeu dzinogona kunge dzadyarwa uye zvichida dzichabuda mumakore mashomanana uye zvichida chimwe chinhu chichaitika .. Zvichida, nokuti chitima che script chiri kutarisana uye saka mbeu dzinogona kubuda zvachose .. zvichida mukana pano nokuti chiyeuchidzo chavo hachina kubviswa?
Panguva ino, ndinofunga kuti unofanira kuchengetedza wako 'Mweya'. Nokuti (uye zvakare maererano nekutsvakurudza kwangu) rufu harusi kungoita 'mutambo pamusoro'. Kunyangwe mushure mekufa kwenyu, rusununguko rwenyu rusununguko ruchaedzwa uye vachaedza kukurega iwe usarudze. Sezvakaita mu "mutambo". Kana iwe ukazvibvumira kuti unyengedzwe uye uite chisarudzo chisina kunaka, 'chiyeuchidzo chako chichabviswa' uye iwe uchazobatanidzwa zvakare mu 'nyama'.
Pakutanga hatisi 'nyama'. Takagadzirirwa kupinda muchimiro ichi uye zvino tava zvakare (munzvimbo dzose) yakagadzirirwa mukuenzanisa. Kana 'rusununguko rwokusununguka' mutemo wepasi rose, saka isu pachedu tapa mvumo yekutamba 'mutambo' (kunyange pasi pezvokufungidzira zvenhema). Chikonzero nei tichigutsikana kutamba mutambo uyu imwe hurukuro.
Saka ikozvino kunyengera kwedu kune (mumwe nomumwe) mushure mekufa hakuiti chisarudzo chisina kunaka zvakare pasi pezita rokuti 'kuzvida'. Nokuti kana iwe ukaita sarudzo ne "rusununguko rwokusununguka" (kuburikidza nekunyengetedzwa pasi pezvakaipa zvenhema), ipapo izvo zvakangoitawo 'kusununguka', kutendeseka kana kurongeka, hazvina basa. Uye izvi ndizvo chaizvo kuti 'rusununguko rwako' rwakaumbwa sei.
Icho hachisi iyo nguva yekuti (kunze kwekusapindira mune zvinyorwa muchimiro chekufananidza (zvakanyanya sezvinobvira) kuti uise pfungwa pane kusava mukuenzanisa zvakare mushure mekufa kwako? 'Game pamusoro' -> 'Player Up, One More Game'.
Kana iwe usingakwanise kukunda 'mutambo', zviri nani here kudzidza kuti ungamira sei kuchitamba? Kunyanya kana chinangwa ndechokugara uchichengetedza mumutambo (Singularity / Transhumanism) uye vanoedza kukupa chisarudzo chekusiya 'mutambo'?
Ndinoda kuziva chiratidzo chako pane izvi ..
Ndinofunga kuti ndiyo yakanakisisa pfupiso!
Saka ndinobvumirana ne100%.
Mupanduki akanyora kuti:
Iwe haubatanidzi pane chinonyanya kukosha pakufananidza nezvinyorwa zvebako. Avo avo vakacherechedza maitiro echokwadi uye vanoziva nezuva rezuva havanzwisisi ne "vakasungwa" apo vanodzokera kubako. Vanoshandawo zvakanyanya zvakare mubako nokuti havasisiri kushandiswa kune nyika yechitsva uye naizvozvo vanoonekwa sevashoma ne "vakasungwa".
Usadzokera zvakare mubako saizvozvo.
S0M30N3 akanyora kuti:
Rimwe rondedzero harina kuuya kuburikidza neiyo chete youtube link: https://m.youtube.com/watch?v=_sB5cTocfZM
Ndinotenda nekuda kwezvose martin, kufemerwa, zvinokurudzira, zvinyorwa zvakajeka, usarega uye uchienderera mberi ..
Kwazisa S0M30N3 - Jeffo
Kana tichida kuchinja mamiriro acho ezvinhu, muno uye iye zvino, tinofanira kuziva kuti ndivo vakomana vemu script vanoita mutemo, kutungamira mutemo kana kuti kwete nemapuroyops, nezvimwe zvinokuvadza vanhu vakawanda. Vakomana ava vakatora mazita echiDutch kuburikidza nemazana emakore uye vachiita seDutch mumazuva ehupenyu, kuitira kuti munhu wose wechiDutch anofunge kuti 'Dutch'. Havasi iyo inosangana nevanoshamwaridzana nevashambadzi ve'lite 'vanochengeta nzvimbo dzinokosha muNetherlands uye vasingadi kusiya / vasingabatanidzi nemaune. Kana tichida kuchinja mamiriro ezvinhu, tinofanirwa kugutsikana uyu muvengi wekuenda kune imwe nyika kuti atsigire nzvimbo dzayo dzinokosha uye kuti abve muNetherlands achizvidira. nokuti iyo ndiyo inokonzera dambudziko muNetherlands. Kana tikabudirira pakuvasiya muNetherlands nokuzvidira, mamiriro ezvinhu muNetherlands achashandurwa nenzira inofadza, pasina hunyengeri, hunyengeri hutsinye, sarudzo dzezvakaipa, nhau dzezvakaipa, nezvimwewo zvavo pamusoro pevanhu vese, ivo vanova nehanya navo chete.
« Peter M. (kubva munin'ina uyu akatendeka kuna Jeroen Pauw) akasungwa zvakare
Kuparadzwa kwekutengesa kwechiratidzo 'rechts', Trump, Brexit (uye zvose zvakabatana nayo) zvakatanga »
Total Visits: 10.294.157
Anja Schaap kubva kuKatwijk weChishanu inotevera "akavigwa" muchikwata chakavharwa
VaDutch havasi kuziva mamiriro avo ezvinhu: muedzo wejeri reStanford
Anja Schaap akawanikwa afa pamhenderekedzo yegungwa pamusoro peWadden Islands, asi nechikepe chipi (myshiptracking.com)?
Anja Schaap akawanikwa afa mugungwa nechikepe cheGermany? Izvozvo zvinokwanisika maererano nemitemo yezvakasikwa here?
SandinG op VaDutch havasi kuziva mamiriro avo ezvinhu: muedzo wejeri reStanford
Riffian op Anja Schaap kubva kuKatwijk weChishanu inotevera "akavigwa" muchikwata chakavharwa
SalmonInClick op VaDutch havasi kuziva mamiriro avo ezvinhu: muedzo wejeri reStanford
Martin Vrijland op Anja Schaap kubva kuKatwijk weChishanu inotevera "akavigwa" muchikwata chakavharwa
JV op Hatingagoni kugadzirisa matambudziko munyika kuburikidza nekufunga uye kutaura, asi nenzira iyi:
Itai 1.599 vamwe vanyori